Ekwakhiweni kwesiza, impilo yesevisi yesibani se-LED nomphumela wokusetshenziswa kwayo kuhlobene kakhulu nokushabalalisa kwayo ukushisa. Uma umphumela wokushiswa kokushisa kwesibani se-LED ungalungile, uzothinta ngqo impilo yesevisi yomkhiqizo nomphumela wohlelo lokusebenza. Ngakho-ke, indima yerediyetha ye-LED ibaluleke kakhulu. Ngokuvamile, ukwakheka kwezibani kwenziwa nge-LED, isakhiwo sokushabalalisa ukushisa, umshayeli, nelensi. Ingxenye ebaluleke kakhulu yesakhiwo sakhe sokushabalalisa ukushisa yisinki yokushisa ye-LED. Ngezansi sizokwethula ngokuningiliziwe izindlela eziningana ezivamile zokushabalalisa ukushisa kwama-radiator e-LED.
Isingeniso ezindleleni ezivamile zokushabalalisa ukushisa kwama-radiator e-LED:
1.I-LED heat sink-aluminium fins sink sink
Amaphiko akhanyisa i-Aluminium ayindlela esetshenziswa kakhulu yokushabalalisa ukushisa kwama-radiator e-LED, ikakhulukazi ukukhulisa indawo yokushisa ukushisa kwe-radiator ngokusebenzisa i-aluminium ekhipha amaphiko.
2. Igobolondo lepulasitiki elenza ukushisa kwe-LED
Igobolondo lepulasitiki elishisayo lingena esikhundleni se-aluminium alloy ngokufakwa kwe-LED kanye nopulasitiki wokushisa wokushisa ukukhulisa amandla emisebe yokushisa ukufeza injongo yokushabalalisa ukushisa.
3. Ukwelashwa kokushisa kwemisebe yokushisa kwe-LED
Ukwelashwa kwemisebe engaphezulu ukufaka upende osusa ukushisa ngemisebe ebusweni besibani se-LED ukukhipha ukushisa kude nobuso bendlu yesibani ukufeza inhloso yokushabalalisa ukushisa.
4. Irediyetha ye-LED — imishini yokukhipha umoya
Ama-air fluid mechanics asebenzisa ukwakheka kwezindlu zesibani se-LED ukudala umoya othumelayo ukufeza injongo yokushabalalisa ukushisa. Le futhi iyindlela yamanje yamanani aphansi athuthukisiwe yokushisa ukushisa.
Lokhu okungenhla kuyizindlela eziyisithupha eziyinhloko zokushiswa kokushisa ezivamile kuma-radiator e-LED.
Isifinyezo sezinye zezinkinga zokushiswa kokushisa kwe-LED, indlela engcono yokuqeda ukushisa kwesibani esiholelekile, inkinga yokushiswa kokushisa kwesibani esiholelekile, kuzokwenzekani uma ukushabalalisa ukushisa kobuhlalu besibani esiholelekile akukuhle, iphedi yokushiswa kokushisa kobuhlalu besibani esiholelekile kudinga ukufakwa ngci, indlela yokushiswa kokushisa kwesibani esiholelekile, kanye nendawo yokushiswa kokushisa kobuhlalu besibani esiholelekile, Ukushiswa kwesibani sokuzenzela okwenziwe ngamalambu igrisi, 1w kwaholela isibani sobuhlalu kudinga ukushisa ukushisa, kwaholela isibani sobuhlalu ukushisa ukushabalalisa design, kwaholela isibani ubuhlalu ukushabalalisa ukushisa 1w ukuthi ingakanani indawo, kwaholela isibani ubuhlalu ukushabalalisa ukushisa kwe-aluminium ipuleti lokushisa, kwaholela isibani sobuhlalu ukushisa ukushabalalisa ukubala Indlela nefomula, Isibani sesibani se-LED ukushabalalisa ukushisa kukhulu, ukukhanya kwesibani se-LED ukushisa ukushisa okukhethekile, izinga lokushisa lokushisa kwe-lamp leded nesikhathi.
Isikhathi Iposi: Sep-24-2021
Izinyathelo zokuphepha zokufakwa komugqa we-LED...
6. Naka indawo engaphezulu futhi icocekile lapho ufaka Ngaphambi kokufaka umucu wokukhanya, sicela ugcine indawo yokufaka ihlanzekile futhi ingenalo uthuli noma ukungcola, ukuze ungaphazamisi ukunamathela komugqa wokukhanya...
1. Ukwenqatshelwa komsebenzi obukhoma Ukukhanya kwe-strip ye-LED ubuhlalu besibani se-LED obushiselwe ebhodini lesifunda eliguquguqukayo elinobuchwepheshe bokucubungula obukhethekile. Ngemuva kokuthi umkhiqizo usufakiwe, uzonikezwa amandla futhi ukhanyise, futhi ...
Izindlela zokonga amandla nezindlela zoku...
"Isibani" asinawo umsebenzi wokukhanyisa kuphela, kodwa futhi sinomsebenzi wokuhlobisa nokuhlobisa. Kodwa-ke, esimweni samandla anganele, ukusebenza kahle kokukhanyisa kufanele kuthuthukiswe futhi ukukhanya ...
Ukukhanya nje kosilingi akwanele ukuthi...
Ingxenye eyodwa kwezintathu yokuphila komuntu ilele, futhi kumelwe sihlale ekamelweni isikhathi eside kunalesi. Ngesikhala esibaluleke kangaka, sidinga ukusihlobisa ngokufudumele ngangokunokwenzeka futhi sisenze sibe yindawo engcono kakhulu yokuphumula kanye ne-e...
Umbala Wezinga Lokushisa Wokukhanya Kwe-LED
Izinga lokushisa lombala lomthombo wokukhanya Abantu basebenzisa izinga lokushisa eliphelele lerediyetha eliphelele elilingana noma eliseduze nezinga lokushisa lombala lomthombo wokukhanya ukuchaza ithebula lombala lomthombo wokukhanya (i ...
Ungawathengi amalambu omgwaqo we-LED...
I-LED Street Light idinga ukuvulwa nsuku zonke futhi isikhathi eside. Uma izidingo zekhwalithi zingekho phezulu, akusibo nje abantu abangagculiseki, kodwa ukuphathwa nokugcinwa kwezibani zomgwaqo nakho kuwumsebenzi onzima....
900w Led Flood Khanyisa, Led Tri-Ubufakazi Khanyisa sesimbembembe , 150 Watt Led Flood Khanyisa, Kwaholela COB Flood Khanyisa, Kwaholela Floodlight 30w, Philips 3030 Led Flood Khanyisa,